Iinyanga-nge-nyanga Iinkcukacha kwiMakers Showers
Ukukhangela i-Meteor Shower Le Nyanga?
Ngaba wakha wabona inkwenkwezi yokuqothula waza wazibuza ukuba yintoni? I-Skygazers ihlala ibona le mibhobho yokukhanya, ebizwa ngokuthi i- meteors , kwi-sky-time-time. Zenziwe njengamatye amancinci okanye uthuli (olubizwa ngokuba yi-meteoroids) dash ngokusebenzisa umoya wethu kwaye ziphefumlelwe.
Indlela abaSebenzi abaSebenza ngayo
I-Perseid meteor kwi-Large Large Telescope e-Chile. ESO / Stephane Guisard
Kutheni kubonakala ukuba iindawo zokuchitha indawo zitshisa phambi kwamehlo ethu? Le ngxaki ibangelwa luhambo olwenzayo emoyeni wethu. Njengoko behamba ngegesi ezigubungela umhlaba, i-meteoroids ifuthe. Ukuqhawuka phakathi kwemoya kunye ne-meteoroids kwakha umoya kwaye i-meteoroids iyakha ubushushu, ekugqibeleni yanele ukuyitshabalalisa.
I-Meteoroids ihlala ibetha i-atmosphere yethu; ukuba umntu uhamba yonke indlela eya emhlabathini, uyaziwa njengemeteorite. Umhlaba udibana neentlobo ezininzi zeengqungquthela zemvelo kwindawo, kuba kukho ininzi ejikelezayo. Ukuba sidlula kwindlela enqabileyo yothuli oluvela kwi-comet ( kunye nee-comets zikhulula uthuli njengoko zifuphi neLanga ) okanye i-asteroid ene-orbit kufuphi neyethu , sinokufumana inani elinyukayo labaxhasi bobusuku obuncinane. Oko kubizwa ngokuba yi-meteor shower.
I-Meteor Showers Ivela Kwinyanga nganye
Izihlandlo ezingaphezu kwembini ngonyaka, uMhlaba uhamba ngomlambo weemfucuza ezishiywe emva kwendawo nge-comet ejikelezayo (okanye ngokungaqhelekanga, ukuhlukana kwe-asteroid).
Xa oku kwenzekayo, sibona iziqhuma zeemetors zikhanya ngezulu. Kubonakala ngathi zivela kwindawo enye yezulu ebizwa ngokuba "yakhazimulayo". Ezi ziganeko zibizwa ngokuba yimvula yamanzi , kwaye ngamanye amaxesha zivelisa ezininzi okanye amaninzi emifudlana yokukhanya ngeyure.
Ukuqwalasela iMiboniso yeMeteor Best Best Knowners ngonyaka
I-streak ye-Leonid Meteor ibonwa ngumbonisi kwi-Atacama Large Millimeter Array eChile. I-European Southern Observatory / C. Malin.
Ngaba ufuna ukujonga ezinye zeemvula zamanzi eziwaziwa kakhulu? Nalu uluhlu lwezinye iziphepho kulo nyaka:
Ii-Quadrantids: Ezi ziqala ngasekupheleni kukaDisemba kwaye ziphakame ekuqaleni kukaJanuwari. Umlambo uMhlaba ogqithisayo owenza ii-Quadrantids zenziwe ngamaqhezu amancinci ukusuka kwe-EH1 ye-asteroid. Ukuba izimo zintle kakhulu, unokubona ngaphezulu kwe-100 meteors ngeyure. Ziyabonakala zihamba ukusuka kwi-constellation Bootes.
AmaLyrids: Aphakathi kwe-Aprili eshabileyo kwaye isoloko ihamba malunga ne-22. Ababonayo banokubona i-1-2 methorsors ngeyure. Abalandeli bayo babonakala bevela kwicala lakwaLyra.
Eta Aquarids : le mbhobho iqala nge-20 ka-Epreli kwaye iphela ngoMeyi. Abaninzi abaxhamli bavela ngeenxa yokuqala kweeyure zoMeyi 5. I-Eta Aquarids iphuma emfuleni osele emva kweCetet 1P / Halley. Unokubona ama-meteors angama-60 okanye ngeyure. La ma-meteors avela kwi-Aquarius ye-constellation.
I-Perseids: Lo ngumnye wemvula edumileyo. Ukuqhaqhazela kwayo ku-constellation ePerseus. Isitya siqala malunga noJulayi kwaye siyaqhubeka ngo-Agasti kamva. Ingqungquthela idla ngokukhawuleza ngomhla we-12 ka-Agasti, xa ungabona abaninzi njengama-meteors angama-100 ngeyure. Le ntlanzi ngumlambo oshiywe emva kwe-109P / Swift-Tuttle.
I-Orionids: Le mbazana iqala ngo-Oktobha 2 kwaye iphela ngeveki yokuqala kaNovemba. Ikhupha nge-21 Oktobha. Ukugquma kwesi saziso yi-Orion yamaqela.
ULeonids: Olunye udoti oluthambileyo lwe-meteor, lwenziwa yimfucuza ukusuka kwi-comet 55P / i-Tempel-Tuttle. Qala ukuqala ukuqala malunga ne-15 kuNovemba ukuya kwe-20, ngenqanaba eliphezulu ngoNovemba 18. Kubonakala sengathi ivela kwi-Leo yeenkwenkwezi.
I-Geminids: le mbhobho iqala malunga ne-7 kaDisemba, i-radiates esuka eGemini, kwaye ihlala malunga neveki. Ukuba iimeko zintle kakhulu, ababukeleyo bangazibona malunga nama-120 abaxhasi ngeyure.
Indlela efanelekileyo yokugcina iimvula zamanzi? Yilungiselele imozulu eshushu! Nangona uhlala kwindawo efudumalayo, ubusika kunye nokusa kusasa kungabanda. Phuma ekuseni kakhulu kwimihla yokuphakama. Gqoka ngokufudumeleyo, uze kunye nokutya okanye ukusela. Yenza kunye ne- app yakho ye-astronomy app okanye inkati yenkwenkwezi ukukunceda uhlolisise isibhakabhaka phakathi kokukhanya kweemeteor. Unokufunda iinqununu, fumana ieplanethi, kunye nokunye okuninzi ngelixa ulinde ukukhanya okulandelayo okukhanyayo esibhakabhakeni. Isithandwa esibhakabhakayo sokubhakabhaka: gquba kwiengubo okanye isikhwama sokulala, hlalani kwisitulo sakho esithandayo sithandle, ulale, kwaye ubale abaxhasi!
Uhlobo Lwezilumkiso Zobusika Obunzima Ngaphambili
Iikhamera eziphezulu ze-Crystal Growing
Iimpawu zeVega Star - Ixesha lethu leNkwenkwezi yeNtshonalanga yeNtshona
Ziyintoni iiDielo kwaye Ziyifumanisa njani?
Iincwadi zeNkwenkwezi zeNkcazo zezoNyaka zonke
Stain How to Remove Removers?
Imfazwe yaseFranco-Prussian: iMfazwe yaseSedan
Isampuli kunye okanye ngaphandle kokutshintsha
Iikhompyutheni zokunika inkxaso kwiNkxaso-Abafundi abakhubazekile kwiiKlasi
Yintoni efuna iMali?
Hlangana noMninkulu we-Raphael, Ingelosi yokuPhilisa
Iingxaki zokusinda ze-Euripides
Umntu Ulungiselela Njani Ukuya eHajj?
Ubambe i-Beltane Bonfire Rite (I-Ceremony yeqela)
Yintoni i-Spring Spring?
Kutheni i-Crocodiles iphumelele ukusinda kwe-K / T?
UDonald Trump Unomlando omdala wobuhlanga kunye nokuziphatha
I-Sagittarius kunye neCapricorn Love Compatibility
I-Synopsis kunye nokuHlola kwe-Aleph kaPaul Coelho
Amandla kaMthetho kaMongameli we-United States
"Ingxaki Sonke Siphila Ngaye" nguNorman Rockwell